संविधान दिवसमा संविधान बनाउने सभासदहरू बाेलाइएन, प्रभातफेरीमा कर्मचारी, सेना र प्रहरी मात्रै
लमजुङ असाेज ३ गते ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ४ वर्ष पुगेको अवसरमा शक्रबार लजमुङके सदरमुकाम बेसीशहरमा संविधान दिवसकाे अपचारिक कार्यक्रम गरियाे । यस अबसरमा बेसीशहरके बेसीशहरके मनाङे चैताराबाट बिहान प्रभातफेरी निकालिएकाे थियाे । बेसीशहर बजार परिक्रमा गरी जिल्ला सभागृहमा पुगी प्रबचन कार्यक्रम गरिएकाे थियाे ।
राजनीतिक दल र सर्वसाधारण अनुपस्थित
देशभर संविधान दिवसलाइ राष्ट्रिय दिवसके रूपमा मनाउने भनिए पनि लमजुङमा त्यसकाे छनक भने देखीएन । राष्ट्रिय दिवस भनिए पनि दिवसमा राजनीतिक दल र सर्वसाधरणकाे उपस्थित नहुँदा दिवस प्रहरी, सेना र कर्मचारीकाे मात्र जस्ताे देखिएकाे थियाे । अायाेजकले राजनीतिक दललाइ नबाेलाएर हाे वा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले बहिष्कार गरेका हुन्, पार्टीगत रूपमा नेपाली कांग्रेसबाहेक अरू दलका नेताकाे उपस्थित देखिएन ।
प्रभातफेरी र प्रवचन कार्यक्रममा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र कर्मचारीहरू र केही संघसंस्थाका प्रतिनिधहरूकाे मात्र उपस्थिति देखियाे ।
नेपालमा यस्ता दिवसहरू अपचारिक रूपमा मनाउने परम्परा नै छ । यस बर्ष संविधान दिवस मनाउने क्रममा पनि परम्पराले निरन्तरता पाये । दिवसके अचित्यबारे जनजनलाइ थाहै भएन । उहिले राजाके पालामा राजा रानीके जन्मेत्सव मनाएझै संविधान दिवस मनाउनुलाइ धेरैले निके मानेनन् ।
अहिले पनि धेरै जनतालाइ संविधान भनेके के हे ? ये किन चाहिन्छ ? भन्ने थाह छैन । त्यता जनतालाइ संविधानमा नागरिकका अधिकारका कुरा थाह हुने त कुरै भएन । दुरदराजका त्यस्ता नागरिकलाइ संविधानका महत्वका बारेमा जानकारी गराउन न त राज्यले पहल गरेके छ, न राजनितिक दलले नै गरेका छन् ।
संविधान दिवस जिल्ला समन्वय समितिके हलमा प्रवचन भयाे। प्रदेश सांसद मधुमाया अधिकारीले सामन्तवादी राजसंस्था हटेर संघीय लेकतान्त्रीक संविधान बनेपछि जनता सबै प्कारके उत्पीठनबाट मुक्त भएकाे बताइन् । बेसीशहर नगरपालिकाका मेयर गुमानसिंह अयार्लले नेपालमा जारी भएका सबै संविधानमध्ये अहिलेके संविधान अग्रगामी रहेके जिकिर गरे ।
जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुंगानाले पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म सिंवधान दिवस कमर्चारी, प्रहरी र विद्यार्थीकाे मात्रै जस्ते देखिएके भन्दै दुःख प्रकट गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा डिजन भटराइले संविधानका विषयमा जनतालाइ बुझाउन सके मात्र सुनैलाे भविष्यकाे निर्माण गर्न सकिने बताए ।
जनताका लागि बनाइएके सविधान भए पनि सिंवधान दिवसमा जनताके सहभागिता नभएके गुनासे पनि कायक्रममा सुन्न पाइये । कायृक्रममा सहभागी शिक्षक इश्वर पाणडेले जनतासमक्ष संविधानकाे महत्व पुरयाउनु पर्ने बताए ।
लमजुङके संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधान बनाएका सभासदहरूले भने खबरसम्म नपाएकाे गुनासाे गरे । संविधान दिवसकाे अवसरमा बेसीशहरकाे रेडियाे मर्स्याङदीकाे लागि अन्तरवार्ता दिने क्रममा संविधानसभा सदस्य जमीन्द्रमान घलेले अाफूलाइ कार्यक्रममा नबाेलाइएकाे बताएका थिए ।
जिल्ला समन्वय समितका अध्यक्ष लेकराज पाणडेके अध्यक्षातामा भएके सिंवधान दिवस कार्यक्रममा २०७२ सालकाे संविधानमा हस्ताक्षार गरेका लमजुङका सभासदहरू चन्द्रबहादुर कुँवर, जमीन्द्रमान घले, भीष्म अधिकारी, टुका हमाल, लाल बहादुर गुरूङ काेही पनि उपस्थित भएनन् ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच मैत्रिपुर्ण फुटबल
चौथो संविधान दिवसको अवसरमा लमजुङमा मैत्रीपुर्ण फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ ।
जिल्लाको सदरमुकाम वेसिशहर नगरपालिकाको फुलबारी मञ्चमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच मैत्रिपुर्ण फुटबल प्रतियोगीता आयोजना गरिएको हो । फुटबल प्रतियोगितामा कर्मचारीको समूहले जनप्रतिनिधिको समुहलाई २ का विरुद्ध ५ गोल गरी विजयी भएको छ ।
संविधान दिवसको पुर्व सनध्यामा दोर्दी गाउपालिकाले वडा स्तरीय हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको छ । दिवसको पुर्वसन्ध्यामा गाउँपालिकाले संविधान दिवसलाई थप प्रभाकारी बनाउन वडा स्तरीय हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता गरेको दोर्दी गाउपालिका उपाध्यक्ष दिल बहादुर घलेले बताए ।
उनका अनुसार प्रतियोगितामा पालिकाका ९ वटै वडाले सहभागिता जनाएका थिए । सहभागि समुहलाई संविधान भित्र भएका धारा ,उपधारा लगायतको विषयबस्तुको बारेमा प्रश्न सोधिएको थियो । संविधानका बारेमा जनप्रतिनिधिलाई सैदान्तिक र व्यहारीक दुवै पक्षको राम्रो ज्ञान हुनु आवाश्यक भएकाले हाजिरजवाफ प्रतियोगिता गरीएको घलेले बताए । प्रतियोगितामा वडा नं. २ अर्चलबोट प्रथम भएको छ ।
त्यस्तै वडा नम्बर ३ श्रीमञ्जयाङ द्धितिया , वडा नम्बर ४ नौथर तृतिया भएको छ भने वडा नम्बर फलेनि सान्त्वना भएको छ । बिजेता भएका वडा समुहलाई क्रमश नगद ४ हजार, ३ हजार, २ हजार र १ हजारको साथमा प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको छ ।
← सिङ्गो भुष्मे गाउँ नै तरकारी खेतीमा, हिजा किन्नेहरू तरकारी बेच्दै
ताङ्लीचाेकमा स्व. हर्क गुरूङकाे सम्झना, उनकाे ब्यक्तित्वमाथि चर्चा →